Vamwe Voshoropodza Kudzingwa kweVamiriri neMapato Vachiti Kuri Kupedza Mari yeNyika neKuita Dzimwe Sarudzo Dzisina Maturo
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDC-T, VaDouglas Mwonzora
Panguva iyo nyika iri kubva mune dzimwe sarudzo dzekutsiva zvigaro zvakasara zvisina vanhu zvichitevera kushaya pamwe nekudzingwa kwedzimwe nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakapinda dziri pasi pemapato eMDC Alliance neZanu PF, dzimwe sarudzo dzinonzi dzinogona kuitwa zvakare chero nguva zvichitevera kudzingwa zvakare kwedzimwe nhengo dzemakanzuru nebato reMDC-T inotungamirirwa naVaDouglas Mwonzora pamwe nebato rePeople’s Democratic Party, PDP.
Mukutanga kwesvondo rino MDC-T yakadzinga nhengo dzemakanzuru gumi nenhanhatu (16) mumatunhu masere emunyika dzichipomerwa mhosva yekudyidzana nebato idzva reCitizen’s Coalition for Change rinotungamirirwa naVaNelson Chamisa, kuchitiwo bato rePDP rakadzingawo kanzura weWard 17 muHarare, VaJacob Mafume vachipomerwa mhosva imwecheteyo.
Kudzingwa kwaVamafume kwakazoita kuti vabviswe kubva pachigaro chameya weHarare negurukota rezvekutongwa kwematunhu VaJuly Moyo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari zvakare mukuru wesangano reCentre for Natural Resource Governance, VaFarai Maguwu, vanoti Zimbabwe yaita dambudziko rekungopinzwa musarudzo dzavanoti dzisina basa.
VaMaguwu vanoti izvi zviri kutambisa mari yenyika inofanirwa kunge ichibatsira munyaya dzebudiriro dzakaita sekuwanisa zvipatara mishonga, asi mari iyi iri kuiswa kusarudzo dzavanoti dzinongodzora zvakare pazvigaro vanhu vanenge vambodzingwa ivavo.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF kuBritain, VaSimba Mavaza, vanoti chekutanga ndechekuti munhu kana achipinda musarudzo anosarudzwa nekuda kwebato raanenge akamirira, kana achipinda akazvmirira obva angotaura kuti ari kupinda akazvimirira vanosarudza voziva.
Vanoti nekuda kwekuti vanhu vari kudzingwa ava vakapinda musarudzo nekuwana zvigaro vachimirira mapato, zviri pamutemo kuti mapato iwayo azovadzinga achishandisa zvakare mutemo kana vachinge vatsautsira kana kutsigira rimwe bato risiri ravanomirira.
VaMavaza vanoti zviri pamutemo kuti munhu anenge asisiri nhengo yebato kana kusatevera zvido zvebato anobviswa kwoiswa mumwe ane chido chekushandira musangano wake.
Hurukuro naVaSimba Mavaza pamwe naVaFarai Maguwu